Ii-AirPods, eyona mveliso yanelisayo ku-Apple kunyaka wayo wokuqala | Ndisuka mac
Ii-AirPods, ezona mveliso zanelisa i-Apple kunyaka wayo wokuqala
Ngokwophando lwamva nje olwenziwe ziiQhinga lokuYila kunye namaFemu amava, Iipesenti ezingama-98 zabanini be-AirPod bathi "banelisekile" okanye "banelisekile" ngee-headphone ezintsha ezingenazingcingo ezivela kwiapile yokuluma, ekufuneka kongezwe kuyo iipesenti ezingama-80 zabathengi abathi "banelisekile." Ukuqonda ubungakanani bezi ziphumo, masihlale sikhumbula ukuba zombini i-iPhone kunye ne-iPad bafumana ukwaneliseka okungama-92% kunyaka wokuqala xa babekhutshwa ngo-2007 nango-2011, ngokwahlukeneyo.
1 Ukoneliseka kwabathengi ngee-AirPod kuphezulu kakhulu
2 Umlingo, umgangatho wesandi, uthando okanye ubomi bebhetri, amagama achaza ngcono ii-AirPods
3 Yintoni eyonelisayo ngee-AirPods
Ukoneliseka kwabathengi ngee-AirPod kuphezulu kakhulu
Okoko baziswa kwihlabathi ekuqaleni kuka-Septemba wonyaka ophelileyo, ecaleni kwe-iPhone 7 yangoku kunye ne-iPhone 7 Plus, ii-AirPods zika-Apple ziphawule ukujika. Ngoyilo olufana kakhulu nee-EarPods, kodwa ngaphandle kweentambo kunye neempawu zepremiyamu yokwenyani, njengokudityaniswa kwayo noSiri, Ii-AirPod zifumene uphononongo oluqinisekileyozombini ngokomgangatho wesandi kunye ne-ergonomics kunye nokusetyenziswa ngokulula. Nokuba ixabiso layo (i-euro ezili-179 eSpain), nangona lisenokubonakala liphezulu xa ulijonga kuqala, aliphezulu kangako xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezinokuthengiswa kwimarike, uninzi lwazo lungaphezu kwamakhulu amabini ee-euro.
Asitsho ukuba ii-AirPod ziyimveliso enexabiso eliphantsi, kwaye azifezekanga, kodwa ngokusekwe kwiziphumo zolu phononongo lwamanani, ziyavelisa inqanaba lokoneliseka phakathi kwabasebenzisi abangazange babonwa ngaphambili Kunyaka wabo wokuqala.
Njengoko kubonisiwe ngaMacebo obuGcisa kunye namava, onoxanduva lwe Esi studio, iindaba ezimnandi zezokuba "Ukoneliseka kwabathengi ngee-AirPod kuphezulu kakhulu".
Emva kokubonisana nabasebenzisi abangama-942 beli fowuni intsha, i-98% yabanini be-AirPod bathi banelisekile okanye banelisekile, ngelixa i-82% yathi banelisekile. A) Ewe, Kwi-98%, ii-AirPods zibeka irekhodi kwelona nqanaba liphezulu lokwoneliseka kwabathengi kwimveliso entsha ye-Apple. Ukuthelekisa, xa i-iPhone yayiqhubeka ukuthengiswa ngo-2007, yayinama-92% ukwaneliseka kwabathengi, i-iPad ngo-2010 yayineepesenti ezingama-92, kwaye i-Apple Watch ngo-2015 yaphakamisa eli nani laya kuma-97%.
Umlingo, umgangatho wesandi, uthando okanye ubomi bebhetri, amagama achaza ngcono ii-AirPods
Abathathi-nxaxheba kolu phando baceliwe ukuba bachaze ngokufutshane uvavanyo lwabo lwee-AirPods; Uhlalutyo olongezelelekileyo lufumanise ukuba awona magama aqhelekileyo asetyenziswa 'afanelekileyo', 'umlingo', 'isandi esihle', 'kulula', 'umgangatho wesandi', 'uthando' kunye 'nobomi bebhetri'. Ukongeza, baqinisekisile ukuba kunjalo kakhulu kunokwenzeka ukucebisa imveliso kubahlobo bakho kunye nosapho.
Uninzi lwabo lubonise ntoni bamangalisiwe yindlela ezisebenza ngayo ii-AirPods, bekhankanya amava amabi ngee-earbuds zangaphambili zeBluetooth, nangona abanye besithi khange baqonde ukuba babelunge kwaye beluncedo kangakanani, kuba ii-AirPod yayizibini zabo zokuqala. Uninzi luye lwabonisa oko Bazithanda ii-AirPods nangaphezulu kunokuba babecinga.
Yintoni eyonelisayo ngee-AirPods
Ukongeza, olu phando lutyhila ezinye iziphumo ezinomdla:
Iipesenti ezingama-84 zibonisa oko Sebenzisa i-AirPod enye kuphela Iyavakala ngamanye amaxesha.
I-88.97% ibalaselisa uphawu lwe ukudibanisa ngokubeka endlebeni.
I-82.5% ifuna ulawulo ngakumbi kumhlaba wokuphatha, umzekelo, ukunyenyisa ivolumu okanye ukutsiba phakathi kweengoma.
Ngama-82%, ii-AirPods zezi imveliso yakho oyithandayo.
Ngama-62%, ii-AirPods bakhuthaze ukuba basebenzise umxholo ongaphezuluo.
Ngokumalunga nokuzithemba kokugcina kuphela iseti yentloko engenantambo, i-64% yabathengi ayivumelani okanye ayivumelani kwaphela nombono we Gcina ii-headphone ezinentambo ziluncedo kwimeko apho ii-AirPod zingasebenzi.
Okokugqibela, isifundo sikhombisa ezona mpawu zintandathu zonelisayo zeAirPods phakathi kwabasebenzisi abavavanyiweyo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ii-AirPods, ezona mveliso zanelisa i-Apple kunyaka wayo wokuqala
Sele sinazo zonke iimodeli ze-2016 MacBook Pro kwicandelo elibuyiselweyo leApple Spain